kwizinga eliphezulu zemihla ngemihla Brillian ...
elona xabiso liphezulu lokucoca ulwelo ...
Ukwandiswa komgubo we-perlite ...
mveliso perlite ore for ...
eyona ilungileyo Hydrophobic Perli ...
1.6 ~ 2.5mm Zeolite molekyuli yokuluka 3a 4a 5a ubume, chemistry, kunye nokusetyenziswa
I-Zeolite sieve yeemolekyulu luhlobo lwe-adsorbent okanye imiboniso bhanyabhanya ene-micropores efanayo, ubukhulu becala eyenziwe nge-silicon, i-aluminium, ioksijini kunye nezinye izinto zentsimbi. Ubungakanani bepore bulingana nobukhulu beemolekyuli ngokubanzi, kwaye iimolekyuli ezahlukeneyo zolwelo ziyahlanjululwa ngokobungakanani bepore. I-Zeolite sieve ye-molecular ibhekisa kwezo zendalo kunye ne-crystalline aluminosilicates ezinomsebenzi we-molecular sieve. I-Zeolite sieve ye-molekyuli ibe sisifundo esizimeleyo ngenxa yesakhiwo sayo kunye nokusebenza kwayo. Ukusetyenziswa kwe-zeolite sieve yeemolekyuli kuye kwasasazeka kumzi mveliso we-petrochemical, ukhuselo lokusingqongileyo, ubunjineli bendalo, ishishini lokutya, amayeza kunye neekhemikhali kunye nezinye iinkalo. Ngokuphuhliswa kwemizi-mveliso eyahlukeneyo kuqoqosho lwesizwe, ithemba lesicelo le-zeolite molecular sieve liye landa ngokubanzi.
Eyona powder yeZeolite yezityalo ngamaxabiso amaninzi
I-powder yeZeolite yenziwe ngokugaya ilitye le-zeolite yendalo, kwaye umbala ulula ngokuluhlaza kunye nomhlophe. Ingasusa i-95% ye-ammonia nitrogen emanzini, ihlambulule umgangatho wamanzi kunye nokunciphisa imeko yokudluliswa kwamanzi.
ore yendalo kunyango lwamanzi china manufacturers
I-Zeolite yi-ore, eyaqala ukufunyanwa kwi-1756. I-mineralogist yase-Sweden u-Axel Fredrik Cronstedt wafumanisa ukuba kukho uhlobo lwe-aluminosilicate ore yendalo ebilayo xa itshisiwe, yiyo ke loo nto yabizwa ngokuba yi "zeolite" (i-Swedish zeolit). "Ilitye" (lithos) elithetha "ukubilisa" (zeo) ngesiGrike. Ukusukela ngoko, uphando lwabantu nge-zeolite luye lwaqhubeka ukwanda.
Imithombo yeendaba yokuhluza iZeolite yenziwe nge-ore ezikumgangatho ophezulu ze-ore, ecociweyo kunye negranulated. Inemisebenzi ye-adsorption, ukuhluza kunye nokususa ubume. Ingasetyenziswa njengesicoci esikumgangatho ophezulu kunye nesiphatho se adsorption, njl.
Indalo yeZeolite enobume bendalo enokuthambeka ngokugqwesileyo
I-Zeolite ecological evuthayo izitena luhlobo olutsha lwezinto zokwakha ezenziwa ngonyango olukhethekileyo lwe-zeolite njengezinto ezingavuthiyo. I-Zeolite ecological evuthayo yezitena isombulula ngokupheleleyo iingxaki zokungena, ukumelana nomkhenkce-unyibilikise, ukugoba kunye nokunyanzela izitena ezivumayo, kwaye inesakhiwo sokukhanya kwaye akukho deformation. , Ukonga umbane, ukhuselo lokusingqongileyo, ulondolozo olulula, i-asidi eyomeleleyo kunye nokumelana nealkali, ubomi obude benkonzo, ubume beendawo ngokubanzi kunye nokuziqhelanisa nemozulu, kunye nemisebenzi ekhethekileyo izitena ezivumayo ezingenakho ukungabinayo.
Isondlo seZilwanyana seZilwanyana seBanga sePowder sokudibanisa yonke imfuyo
I-powder yeZeolite yimveliso eyimpuphu efunyenwe ngokusila kunye nokuhlola i-zeolite yendalo. Ayisetyenziswa kuphela kwimizi-mveliso yokwakha, kodwa ikwanamagalelo amaninzi kwimizi-mveliso yemfuyo kunye neenkukhu. I-zeolite yendalo yi-hydrous aluminosilicate yesinyithi se-alkali kunye ne-alkaline yomhlaba, kunye neyona nto iphambili kuyo yi-alumina. I-Zeolite feed Grade ine-adsorptive kunye ne-adsorptive ekhethiweyo, iipropati zokutshintshiselana nge-ion, iipropati zokunyanzeliswa, ukumelana nobushushu kunye nokumelana ne-asidi.
Isichumisi seZeolite Isixhobo somhlaba seZeolite soMhlaba & Ingca
Umcwangcisi womhlaba we-zeolite yindawo yokulungisa umhlaba esebenzayo elungiselelwe ukusuka kwi-zeolite yendalo. I-zeolite yokulungisa umhlaba idityaniswe ne-zeolite yendalo ngenkqubo ekhethekileyo, evuselela ngokupheleleyo iimpawu ezizodwa kunye nemisebenzi ye-zeolite yendalo, kwaye ineziphumo ezizodwa kumhlaba odityanisiweyo, umhlaba wesibini ofakwe ityuwa, umhlaba ongcoliswe zizinyithi ezinzima, kunye neendawo ezingcolisekileyo ezine-radioactive. Sebenzisa itekhnoloji ye-zeolite ukumilisela ukulungiswa komhlaba, iindleko eziphantsi, ukusebenza ngokukhawuleza, ukulungiswa komzimba, kwaye akukho kungcoliseka kwesibini.
Ibhola eyandisiweyo kunye ne-vitrified ibangelwa kukuqiniswa komphezulu ukwenza amandla athile e-particle, iipropathi zomzimba kunye neekhemikhali zizinzile kakhulu, ukuguga kunye nemozulu yomelele yomelele, kwaye banobushushu obugqwesileyo, ukhuseleko lomlilo kunye neepropathi zokufakwa kwesandi. Zikulungele ukuzaliswa kokukhanya kunye nokufakwa kobushushu kunye nokukhusela umlilo kwiinkalo ezininzi. Materials Izinto ezifunxa isandi kunye nezinto zokwambathisa ubushushu. Kwishishini lezinto zokwakha, ukusebenzisa ibhola eyandisiweyo kunye ne-vitrified njengemilinganiselo engasindi inokuphucula ukufudumeza kunye nokumelana nodaka, ukunciphisa ukuncipha kweepropathi zezinto ezibonakalayo, ukuphucula ukusebenza kwemveliso, kunye nokunciphisa iindleko ngokubanzi zemveliso.
I-HGM Hollow Glass Microspheres abavelisi bokufaka i-thermal
Ii-microspheres zeglasi ezingenanto zingumbala omhlophe ngembonakalo, ezizizixhobo ezingaxutywanga zomgubo ezinamanzi amahle. Iimpawu zezi: ukugquma kwesandi, ukulibaziseka kwelangatye, ukufakelwa kombane okuhle, ukuxinana okuphantsi, ukufakwa kweoyile ephantsi, kunye namandla aphezulu. Isetyenziswa ngokubanzi ekushicileleni ii-inki, izinto zokubambelela, iiplastiki zobunjineli, irabha eguqulweyo, kunye neendawo zokufaka umbane. Ngenxa yokusebenza kwayo okuzinzileyo, ukumelana nemozulu elungileyo, kunye nexabiso eliphantsi, isetyenziswe ngokubanzi.
Izinto eziphambili zeglasi ezigobileyo zi-silicon dioxide-SiO2 kunye ne-aluminium oxide-Al2O3 emva kokugxothwa kwaye yahlelwa kubushushu obuphezulu be-1400°C. Ububanzi be microspheres zeglasi eziwuphakathi phakathi kwe-5 ne-1000 microns.
ipeyinti eyongezelelweyo Powder yodongwe iyathengiswa
Umgubo weCeramic kukukhanya okungaxutywanga yintsimbi. Izinto eziphambili zi-SiO2 kunye ne-Al2O3. Umgubo weCeramic unokusasazeka okuhle, amandla aphezulu okufihla, ubumhlophe obuphezulu, ukumiswa okuhle, uzinzo lweekhemikhali, iiplastikhi ezilungileyo, ubushushu obuphezulu obunobushushu, kunye nobuninzi obuphezulu. Incinci, ilahleko esezantsi kwisibane sokukhanya, ukusasazeka kokukhanya okuhle kunye nokugquma okuhle. Ingayiphucula i-adsorption, ukumelana nemozulu, ukuhlala ixesha elide, ukuxhathisa umhlwa, ukumelana nobushushu obuphezulu bepeyinti, ukuphucula iipropathi zoomatshini befilimu yokupeyinta, ukwandisa ukungafihli, kunye nokuphucula ukumelana nomlilo. Ingasetyenziselwa i-anticorrosion, ukumelana nomlilo, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, umgubo, ukutyabeka ulwakhiwo kunye nokutyabeka okungafaniyo kumzi-mveliso kunye noluntu kufanelekile ngokukodwa kwimigangatho ye-gloss semi-gloss kunye nezinye izinyibilikisi. Banokutshintsha isixa se-titanium dioxide, basuse ifoto-flocculation yesenzeko ebangelwe kukusetyenziswa kwe-titanium dioxide, kuthintele ukupeyinta okutyheli, kunye nokunciphisa iindleko zemveliso zeshishini. I-Ceramic powder yaziwa ngokuba "yinto entsha kwixesha lesithuba
Powder yokunyibilikisa isinyithi impukane impukane uthuthu cenosphere amasuntswana izinto
impukane luthuthu cenosphere luhlobo lwempukane lothu ibhola kumngxuma ezinokudada phezu kwamanzi. I-ash ash cenosphere icacile-imhlophe, ineendonga ezibhityileyo kunye nokungena, ubunzima obunzima kakhulu, i-160-400 kg / m3, ubungakanani be-particle malunga ne-0.1-0.5 mm, kwaye umphezulu uvaliwe kwaye ugudile. Ukuqhutywa kwe-thermal esezantsi, ukuphinda ubonakalise ≥1610 ℃, yinto ebambekayo yokuhambisa izinto ezishushu, esetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yezinto ezingasasebenziyo kunye nokombiwa kweoyile. Ukwenziwa kweekhemikhali ze-fly ash cenosphere ikakhulu yi-silica kunye ne-aluminium oxide. It has iimpawu ezininzi ezifana amasuntswana ocoliweyo, ezibuhlazarha, ubunzima ukukhanya, amandla aphezulu, ukunxiba ukumelana, ukumelana lobushushu eliphezulu, ubushushu thermal, usambathisa kunye nelangatye nekudodobalisa.
Umxube wodaka wokutyabeka udaka kubakhi
Ukutyabeka okungathethekiyo ukudaka udaka yinto eyomileyo yomgubo inkampani yethu isebenzisa ekumgangatho ophezulu we-calcined desypurum powder, i-microbeads ene-vitrified kunye ne-admixtures ezingeniswe kwamanye amazwe ukuxuba kwinxalenye ethile. Le mveliso isetyenziselwa ngokukodwa ukulinganisa iindonga zangaphakathi kunye neesilingi zeeprojekthi zokwakha eziphezulu. Yimveliso entsha, enobume bendalo kunye noqoqosho ekhuthazwa lilizwe endaweni yodaka lwesamente. Ayisiyiyo kuphela amandla esamente, kodwa isempilweni kwaye inobuhlobo ngakumbi kwindalo esingqongileyo kunesamente, yomelele kwaye yomelele, ngokunamathela okuqinileyo, akukho lula ukuyicola, ukuqhekeka, ukuhomba, kwaye ingawi. Powder kunye nezinye izibonelelo, kulula ukuyisebenzisa kunye nokonga iindleko. Ngokwexabiso leyunithi, ukudaka udaka lwe-gypsum kubiza kakhulu kunodaka lwesamente, kodwa ukudaka udaka lwe-gypsum kunezibonelelo ezininzi. Ithathiwe kunye, iindleko zokutyatyekiswa kwimitha nganye yesikwere ngodaka lwe-gypsum lusezantsi kunodaka lwesamente.